यी कुराहरु सधै ध्यानमा राख्नुहोस जो ३० वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ ! « Sajha Page
यी कुराहरु सधै ध्यानमा राख्नुहोस जो ३० वर्षभन्दा कम उमेरको हुनुहुन्छ !
तपाईं जिन्दगीमा कु
नै यस्तो काम गर्नुस्, जसले रोलमोडल बन्न सहयोग पु-याओस् । जसले तपाईंको आत्मविश्वास बढाउने काम गर्छ । तपाईं बच्चा, युवा वा वृद्धवृद्धा जोसुकै बन्न सक्नुहुन्छ ।